DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP LASERJET 1200 SERIES - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet 1200 Series
LaserJet 1200 Series printer adịghị apụta n'etiti ngwaọrụ ndị ọzọ yiri nke HP. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike ịchọrọ ndị ọkwọ ụgbọala ọrụ maka ọrụ siri ike, a ga-akọwa nyocha na ntinye ya mgbe e mesịrị.
Ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ ụzọ ịchọ na budata ngwanrọ maka LaserJet 1200 Series. A na-atụ aro ka ị budata ndị ọkwọ ụgbọala naanị site na isi mmalite ndị isi.
Usoro 1: HP Official Resource
Ụzọ kachasị mfe iji wụnye ọkwọ ụgbọala maka LaserJet 1200 Series bụ iji ụlọ ọrụ HP rụọ ọrụ. E nwere ike ịchọta ngwanrọ dị mma, dị ka ọ dị n'ihe gbasara ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ, na mpaghara pụrụ iche.
Nzọụkwụ 1: Download
Mepee ibe na njikọ n'elu, jiri bọtịnụ ahụ "Onye nbipute".
Tinye aha nlereanya nke ngwaọrụ gị n'ime ederede egosipụtara ma pịa njikọ kwekọrọ na listi gbasaa.
Ngwa a na-atụle bụ nke ụdị ndị a ma ama, ya mere nkwado niile nsụgharị nke Os. Ị nwere ike ezipụta ihe achọrọ na ngọngọ ahụ "Sistem Ịrụ Ọrụ Họrọ".
Ugbu a gbasaa akara "Driver-Universal Print Driver".
N'etiti ụdị ngwanrọ e gosipụtara, họrọ ụdị PCI dakọtara maka ngwaọrụ gị. Enwere ike ịchọta ihe ọmụma zuru ezu site na ịgbasa window ahụ "Nkọwa".
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị maghị ihe onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwere, ị nwere ike ịnwale ma nhọrọ.
Mgbe ị mere nhọrọ, pịa "Download" ma dee ebe ịchekwa faịlụ ahụ na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị nweta nbudata nke ọma, a ga-ebute gị gaa na saịtị pụrụ iche na nkọwa zuru ezu banyere iji ngwugwu nwụnye.
Nzọụkwụ 2: Nwụnye
Mepee folda ahụ na faịlụ ebudatara ma pịa ya abụọ.
Na windo meghere, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ụzọ maka ịmeghe faịlụ ndị isi.
Mgbe ahụ jiri bọtịnụ ahụ "Wepụ".
Mgbe ịmechapụrụ ihe, windo nwụnye software ga-emeghe.
Site na ụdị nwụnye dị iche iche, họrọ ihe kwesịrị ekwesị na gị ma pịa bọtịnụ. "Na-esote".
Ọ bụrụ na i mere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, usoro ịmepụta faịlụ na ntinye ntinye nke ngwaọrụ na usoro ahụ ga-amalite.
Tụkwasị na nke a, ị ga-amalitegharịa kọmputa ahụ. Anyị nọ na njedebe nke usoro a, ebe ọ bụ na mgbe emechara omume, onye nbipute ahụ ga-adị njikere maka ojiji.
N'etiti ngwá ọrụ ọkọlọtọ nyere site na HP iji melite ndị ọkwọ ụgbọala, ị nwere ike iji ọ bụghị naanị saịtị, kamakwa ọrụ pụrụ iche maka Windows. Ngwaọrụ a dịkwa mma maka ịwụnye ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ na laptọọpụ HP.
Gaa na Enyemaka Enyemaka Nkwado HP
Iji njikọ ahụ nyere, pịa "Download" na elu aka nri.
Site na nchekwa ebe ebudatara faịlụ nwụnye, pịa ya ugboro abụọ.
Jiri ngwa ngwa iji wụnye usoro ihe omume ahụ. Usoro dum na-ewere ọnọdụ na-akpaghị aka, na-enweghị mkpa ka ị gbanwee mpaghara ọ bụla.
Mgbe echichi ahụ zuru oke, gbanye software ahụ na ajụjụ ma setịpụ ntọala ndị bụ isi.
Iji wụnye ọkwọ ụgbọala n'enweghị nsogbu ọ bụla, gụọ nkuzi ọzụzụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịbanye na mmemme ahụ iji akaụntụ HP gị.
Tab "Ngwaọrụ m" pịa akara "Lelee maka mmelite".
Usoro nke ịchọta ngwanrọ dakọtara ga-ewe oge.
Ọ bụrụ na achọtachara ọchụchọ ahụ nke ọma, bọtịnụ ga-apụta na mmemme ahụ. "Mmelite". Mgbe ị na-ahọpụta ndị ọkwọ ụgbọala achọta, wụnye ha na bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Usoro a naanị na ụfọdụ na-enye gị ohere ịchọta ngwanrọ ọma. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ ga-akacha mma ịnweta nbudata onwe onye si na saịtị ahụ.
Usoro 3: Nke atọ nke Software
Iji wụnye ma ọ bụ melite ndị ọkwọ ụgbọala, ị nwere ike iji otu n'ime mmemme pụrụ iche, nke ọ bụla n'ime ha nyochachara nke anyị na ihe ndị ọzọ. DriverMax na DriverPack Ngwọta nwere ike ịkọ na ngwa kachasị adaba iji. N'ihi ụzọ a, ị nwere ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa nke nsụgharị kachasị ọhụrụ, jikọtara ya na sistemụ arụmọrụ.
Gụkwuo: Software maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na PC
Usoro 4: Ngwongwo ID
N'adịghị ka ụzọ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, ịwụnye onye ọkwọ ụgbọala site na ịchọ ya site na njirimara ngwaọrụ bụ ihe kachasị. Nke a bụ eziokwu ahụ na saịtị DevID ma ọ bụ ihe analogues na-ekpuchi ma ọ bụ ngwanrọ na ndị na-achịghị akwụkwọ. Maka nkọwa zuru ezu banyere ngụkọta nke ID na ọchụchọ anyị gwara na isiokwu kwekọrọ na website anyị. Na mgbakwunye, n'okpuru ị ga-achọta ihe nchọpụta maka usoro ndị na-ebi akwụkwọ na ajụjụ.
USB VID_03f0 & PID_0317
USB VID_03f0 & PID_0417
Gụkwuo: Chọọnụ ndị ọkwọ ụgbọala site na ID ngwaọrụ
Usoro 5: Windows Ngwaọrụ
Site na ndabara, LaserJet 1200 Series printer na-akpaghị aka na-akwalite ndị ọkwọ ụgbọala dị ala, nke zuru oke iji rụọ ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ngwaọrụ adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ị nweghị ike ibudata ngwanrọ site na saịtị ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye na ngwaọrụ Windows. N'ihi nke a, onye nbipute ahụ ga-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị na njikọ mbụ nke mbụ.
Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ ntuziaka a, ị nwere ike ịjụ gị ajụjụ gbasara isiokwu ahụ. Anyị na-abịa na njedebe nke isiokwu a ma nwee olileanya na ị nwere ike ịchọta ma budata ngwanrọ dị mma nke HP LaserJet 1200 Series.